The Irrawaddy's Blog: ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် ရေးကြတဲ့ ဟစ် (ပ်) ဟော့ သမားတွေ
ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် ရေးကြတဲ့ ဟစ် (ပ်) ဟော့ သမားတွေ
မြန်မာ ဟစ် (ပ်) ဟော့ အဆိုတော်တွေ သရုပ်ဆောင်တယ်၊ ရန်ကုန် ဂိုဏ်းစတား စရိုက်တွေကို ဖော်ကြူးတယ်လို့ အောလ် ချယ်နယ်မှာတော့ ရေးထားပါတယ်။ ကားနာမည်က “ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် ရေးကြသူများ” ဖြစ်ပြီး စင်ကာပူမှာ ပြမယ့်ကား ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ယုန်လေး၊ ရသ၊ ကြက်ဖ၊ ဂျောက်ဂျက်၊ သဇင်၊ အေသင်ချိုဆွေ စတဲ့ အဆိုတော်ပေါင်းများစွာ ပါတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဘယ်လောက်ကြမ်းတယ် ရမ်းတယ်၊ ဘယ်လောက်အထိ တင်ပြထားသလဲဆိုတာ အောက်မှာ နမူနာ ပေးထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်း ယုန်လေး၊ ဇာတ်ညွှန်း အောင်ကြီး၊ ဒါရိုက်တာက ညိုမင်းလွင်နဲ့ သားညီ ပါ။
Posted in: News , သတင်း , အညွှန်း
ဗမာ့ အာဇာနီတွေက နိုင်ငံတကာတန်း မဝင်ဘူးလေ။
အဆင့်မြင့် မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားဆိုပဲ။ ဘယ်လို မြင့်လဲတော့ မသိဘူး။ အင်္ကျီချွတ်၊ ဘောင်းဘီ စကတ် ချွတ်တာနဲ့ အဆင့်မြင့်သွားသလား။ နေပြည်တော်က နောက်ခံတွေပါလို့ အဆင့်မြင့်သွားလား။ အတီး၊ အဆို၊ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ် ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်လို့ အဆင့်မြင့်နေလား။ ဗီဒီယို effect များများထည့်နိုင်လို့ အဆင့်မြင့်နေတာလား။ စောက် ဆိုတဲ့ စကားလေးထည့်လိုက်လို့ အဆင့်မြင့်သွားသလား။ ကြည့်စမ်းချင်တယ်ကွာ။ ကော်ပီထွက် လာလို့ အွန်လိုင်းရောက်လာရင် လင့်လိုက်ဗျာ။ ကြိုတင် ဘွတ်ကင်နဲ့ ကြိုတင် ကျေးဇူးစကား ဆိုထားလိုက်မယ်။
လီကွမ်ယုက သူတို့ထက် မိုက်သေး၊
အတိုက်အခံတွေ ဘာသံမှ မထွက်နိုင်ပဲ ပျောက်ပျောက်သွားတာ၊
သရုပ်ဆောင်တွေက အရမ်း over နေတယ်ဗျာ။ ထွန်းထွန်းဝင်း သရုပ်ဆာင်တာတော့ ကောင်းပါတယ် ။ သေချာတာကတော့ လုံးဝ သွားမကြည့် ဘူး :P
အခုလိုတိုင်းပြည် ပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ အခုလို တိုင်းကျိုးပြည်ပြုကားလေးကိုအဆင့်မြင့်မြင့်ထုတ်လုပ်လိုက်တာ ဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါ ၊ တိုင်းပြည်တွင်းရှိတဲ့ ပြည်သူ့စွမ်းအားရှင်များ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင်ဖြွံ့ဖိုးရေးမှပုဂ္ဂိုလ်များ ၊ မကြာမီကမှ လွတ်မြောက်သွားသော စကော်ပီယန်အကိုကြီးများမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုကြရမှာဖြစ်သလို၊ အမက ၊ အလက ၊ အထကမှ ညီအစ်ကိုများ ညီမငယ် များအနေနှင့် ကိုယ်သမိုင်းကိုယ် မည့်သို့ရေးကြသည်၊ရေးရမည်ကိုသေချာစွာမျတ်သားနာယူနိုင်အောင်ကြည့်ရှုပြီး ကျော်ငးအုပ်ကြီးများအနေဖြင့်လဲ ကျော်ငးသားတယောက် ဗီစီခွေခွေတခွေ မ၀ယ်မနေရဆိုပြီးေ၇ာင်းချသင့်ပါကြောင်း ၊
မောင်တုံး said... :
အင်း ကြည့်ရတာ ရင်တောင်တုန်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလိုမျိုး အကျိုးမရှိတဲ့ကောင်တွေ တစ်ကျော့ပြန်မလာပါစေနဲ့ ဆုတောင်းရမှာပဲ။ ကြည့်ကောင်းအောင် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် ရိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာတွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ သမိုင်းရေးတဲ့ပုံစံလို့များပြောရမလားဘဲ။ လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်အတွက်လားမသိဘူး။ လူငယ်တွေအတုခိုးမှားမှာကြောက်ရတယ်။ ဇာတ်ကားတွေကို ဘယ်သူသာလျှင်ကြည့်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ချက်ကို အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆင်ဆာမရှိသင့်ဘူးဆိုတာကို ပြန်စဉ်းစားရမလိုတောင်ဖြစ်နေပြီ။ အာဏာပိုင်ဆင်ဆာမဟုတ်ဘဲ အနုပညာရှင်၊အသိပညာရှင်များပါဝင်တဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကပဲဖြစ်ဖြစ် တာဝန်ယူပြီး ထိန်းကွပ်ပေးရင်ကောင်းမလားလို့။
ဒီလို အကြောင်းမဲ့ ရမ်းနေတဲ့ ကားမျိုးကို စင်ကာပူမှာ ပြဦးမှာလား။ စင်ကာပူက မြန်မာတွေကို လိုက်အရှက်ခွဲ မလို့လား ညိုမင်းလွင်။ ရိုက်ထားတဲ့ ဇါတ်ကား ၊ သရုပ်ဆောင်တဲ့ ပုံစံ ၊ သုံးနှုံးတဲ့ စကားလုံး ၊ မာဖီးယား ဂိုဏ်းလိုလို ၊ ဆိုမားလီယား နိုင်ငံလိုလို ဥပဒေမရှိ ၊ အုပ်ချုပ်သူ မရှိ ၊ ရမ်းကား မိုက်ကန်းတာတွေ အလယ်တန်း ၊ အထက်တန်း ကျောင်းသားလေးတွေ ကြည့်မိရင် ဘယ်လိုတွေ အတုယူကုန်မလဲ။ ရိုက်တဲ့ ဒါရိုက်တာ ရော၊ ၀င်ရိုက်တဲ့ မင်းသားဖြစ်ချင်နေတဲ့ အဆိုတော်အမည်ခံ မျောက်ရှုံးတွေ ကရော ဒီဇါတ်ကားကို ရိုက်ဖို့ ဦးနှောက်နဲ့ စဉ်းစားပြီး ရိုက်ထားတာ မဟုတ်ဘူးလို့ဘဲ သက်သက်ညှာညှာ ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
P2 said... :
I think that's cool! Well, in US and other western countries,which were regarded as developed and democratic nations, they have these kinds of illegal and action movies. These don't destroy youths with illegal stuff. I think it is fine to allow to be produced. I dont think censorship is good. It is freedom of expression. As long as it doesnt degrade someone directly, it is fine. I dont understand some Burmese old people are conservative. It is time for Burmese to be open-minded and cool!
by watching preview, honestly and objectively speaking........it isakind of crap just like many others.
After all those years, Myanmar Movie is ' more or less ' the same.
Myanmar good in copying of ' crap ' ... like ' sex works, karaoke, rap, hip hop... etc. .
I support the ' Khit Yay See Kyaung ' . People have to do it in well proportion.
Please emphasize more on ' daily needs.. toilet papers, tooth pastes, soaps, sanitary napkins, ..and so on ' for 50 millions population.
Also learn and invest more money on movie industry. ( acting, action, back ground, presentation style ) .. FIRST, SECURE YOUR FINANCE.
Plagiarism is very common and easy to do it. Do it with your own ' idea '.
Summarily speaking.........this is rubbish . Do not support this movie. No offense to anyone in this movie. No offense to everyone.
Such comment does not reflect ' conservatism. Ans supporting does not reflect ' Liberalism ' either.
ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် ရေးကြတယ်ဆိုတာလေးကတော့ မှန်ချက်က လွန်ပါတယ်၊ ကောင်းတဲ့သမိုင်း မဟုတ်တာက လွဲရင်ပေါ့လေ။ လူဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာကောင်လဲ ဘာလူမျိုးလဲ ဆိုတာလောက်တော့ သိရတယ်။ အရှေ့လိုလို အနောက်လိုလို နဲ့ စပ်ကြားကြီးတွေ လုပ်နေရင်တော့ အဆင့်မြင့်လာမှာတော့ မဟုတ်ဘူး၊ အဆင့်မရှိ ငပေါကြီးတွေပဲ။
အခုလိုတိုင်းပြည် ပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ အခုလို တိုင်းကျိုးပြည်ပြုကားလေးကိုအဆင့်မြင့်မြင့်ထုတ်လုပ်လိုက်တာ ဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါ ၊ တိုင်းပြည်တွင်းရှိတဲ့ ပြည်သူ့စွမ်းအားရှင်များ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင်ဖြွံ့ဖိုးရေးမှပုဂ္ဂိုလ်များ ၊ မကြာမီကမှ လွတ်မြောက်သွားသော စကော်ပီယန်အကိုကြီးများမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုကြရမှာဖြစ်သလို၊ အမက ၊ အလက ၊ အထကမှ ညီအစ်ကိုများ ညီမငယ် များအနေနှင့် ကိုယ်သမိုင်းကိုယ် မည့်သို့ရေးကြသည်၊ရေးရမည်ကိုသေချာစွာမျတ်သားနာယူနိုင်အောင်ကြည့်ရှုပြီး ကျော်ငးအုပ်ကြီးများအနေဖြင့်လဲ ကျော်ငးသားတယောက် ဗီစီခွေခွေတခွေ မ၀ယ်မနေရဆိုပြီးေ၇ာင်းချသင့်ပါကြောင်း ---- တဲ့။ သိပ်ကောင်းတဲ့ ထေ့လုံးလေးပါပဲ။ ကျနော်လည်း နည်းနည်းတော့ မြည်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ သိပ်ရင်လေးမိတယ်ဗျာ။ အနိမ့်ဆုံး PG (Parental Guidance) အဆင့် သတ်မှတ်ရမယ့် ကားမျိုးပါ။ ဂီတအမျိုးအစားနဲ့ပါက်သက်လို့ ကတော့၊ ဘာမှပြောစရာကို မရှိပါဘူး။ ပြောစရာအကြောင်းကို မရှိလို့ ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်အသံလေးတွေက ကောင်းနေပေမယ့်၊ ကာရံရှိပြီး သံစဉ်မဲ့နေတဲ့ ဂီတကိုလိုက်စားနေကြတာဟာ
neogunner said... :
မြန်မာကားတွေမှာ ဖိုက်တင်ပလေးတာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက ဇာတ်ကားတွေရဲ့ ခြေဖျားတောင် မမီဘူး။ ထိုင်းကား The Red Eagle ၊ Uncle Boonmee နဲ့ Tony Jaa ရဲ့ဇာတ်ကားတွေ၊ 2011 မှာထွက်တဲ့ မလေးကား Hikayat Merong Mahawangsa နဲ့ KL Gangsters ကားတွေကိုကြည့်ရင် အာစီယံ အဆင့်မှာတောင် မြန်မာကားတွေ လုံးဝပြတ်ကျန်ခဲ့ပြီဆိုတာ သေချာတယ်။ မြန်မာ ဇာတ်ကားတွေလည်းမြန်မာ့ အားကစားလိုပဲ.......
သေချာတာကတော့ လုံးဝ သွားမကြည့် ဘူး
မိတ်ဆွေ....အင်တာနက်ပေါ်တင်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ဝေဘန်ကြတာ ဘာဆန်းသလဲ။ အဲသည် နမူနာလေး ၂ ကွက်ကိုက ရစရာမရှိအောင် စုတ်ပြတ်နေလို့ ဝေဘန်ကြတာ နေမှာပေါ့။ အကုန်လုံးကြည့်ပြီးမှ အရာရာကို သိရမယ်လို့ ဘယ်သူက ပြောသလဲ။ အဲဒါ ဥာဏ်တုံးသူတွေမှ ပြောတာ။
ပြောမလို့ကြည့်နေတာပြောချင်နေတာ၊ ခင်ဗျားတို့ဒါရိုက်တာတွေရှက်ရင်လဲသေင့်တယ်၊ ထိုင်းကရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင် king Naresuan ကိုပဲကြည့်ဗျာ ၊ အဲဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ခန်းနားမှု ၊အကုန်အကျခံမှုနဲ့ပီပြင်မှုတွေ ၊လူတိုင်း စနစ်တကျအပိုအလိုမရှိသရုပ်ဆောင်ထားတာတွေ ဇာတ်လမ်းရဲ့ကျောရိုးအမှန်က ဟံသာဝတီနေပြည်တော် မှာဘုရင့်နောင်မင်းတရားကြီးရဲ့ လက်မှာကြီးလာတဲ့ ဗျနရေ့ ယိုးဒယားမင်းသားက မြန်မာကိုပြန်တွန်းလှန်တဲ့ရုပ်ရှင် ၊ တစ်တွဲကို ၃ နာရီလောက်ကြာတယ်၊ အတွဲ ၄ အထိ ရှိပြီ ၊ သြစတြေးလျှကမြင်း တွေ နဲ့ မြင်း trainer တွေကို လေယာဉ်နဲ့စင်လုံးခေါ်တင်ပြီးလေ့ကျင့်ပြီးရိုက်တာ ၊ ခင်ဗျားဗျာ ၊ဟံသာဝတီနေပြည်တော် ကို သူတို့ရိုက်ကွင်းထဲမှာကြည့်မှ ဒို့မြန်မာ ထီးနန်းဒီလောက်ခမ်းနားခဲ့ပါလားလို့တွေးမိတယ်၊ ဘုရင့်နောင်ရဲ့လက်အောက်ထီးဆောင်းမင်းတွေ အများကြီး ညီလာခံလုပ်တာတွေ ၊အခစားဝင်တာတွေ ၊ စစ်တိုက်တာတွေသေနကဗျူဟာတွေ ၊ဆင်မြင်းတွေအများကြီး၊၊တောင်ငူဘုရင်နတ်သျှင်နောင်ရတုစပ်တာကအစ၊ ဟံသာဝတီနေပြည်တော် ရှုခင်းတွေ ၊ထိုင်းကတော့သူတို့လူမျိုးဘက်ကအမှန်ရိုက်မှာပဲလေ၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရိုက်တဲ့ ရိုက်ကွက်တွေမှာတင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ထီးနန်းခန်းနားမှု ကိုသွားတွေ့တော့ဗျာ...ဇာတိသွေးတွေတောင် တက်ကြွလာတာဗျာ ၊ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ဒီလိုခမ်းနားတဲ့ဇာတိမာန် ရုပ်ရှင်တောင်မရိုက်နိုင်ဘူးဗျာ၊ပြန်ကြားရေးဘာလုပ်နေလဲ၊ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဘာလုပ်နေလဲပြောချင်ပါရဲ့ ၊သြော်ပြောရဦးမယ်၊ခင်ဗျားတို့ ပြန်ကြားရေးနဲ့ရုပ်ရှင်အဖွဲ့တွေရောကြည့်ပြီးပြီလား၊